Yimaphi amathuba aphelele okuthola i-backlink kusayithi lakho?
Njengoba ukuhlelwa kwe-algorithms yosesho kushintsha ngokuhamba kwesikhathi, kubangele nokuguqulwa ngezindlela kokubili kokuhlelwa kwe-. Ukusebenza kwe-injini yokusesha kuzoba nzima nakakhulu esikhathini esizayo ngenxa yokuncintisana okukhulayo kumkhakha wokuthengisa we-digital. Kanye nezinguquko ku-algorithms yokusesha, ukuziphatha kwabasebenzisi bokusesha kuzovame ukuguqula futhi, okwenza isiteji sedijithali sigqugquzele nakakhulu, ikakhulukazi uma kuziwa ekuxhumaniseni isizukulwane. Bonke abakwa-webmasters baqonda ukubaluleka kwangempela kwama-backlink kunoma imuphi umthombo wewebhu futhi bafaka imizamo yabo ekuzuzeni. Ngenkathi uthola izinga eliphezulu, izixhumanisi zangaphandle eziqondene nesayithi lakho KUPHELA ngokuthuthukiswa kwebhizinisi lakho lokubonakala; umsebenzi ukhulunywa kalula kunokwenza. Kulesi sihloko, sizoxoxa ngamasu amasha abalulekile ekutholeni ama-backlink aphezulu kusuka kumasayithi aphezulu we-PR futhi sithuthukise isikhundla sakho ekhasini lekhasi lokusesha.
Indlela yokuthola i-backlink kusayithi lakho?
Hlola okushiwo umkhiqizo wakho
Ngenye yezindlela eziwusizo futhi ezilula kakhulu zokwakha izixhumanisi ongazisebenzisa uma umkhiqizo wakho unomusa ophezulu ngaphakathi kwe-niche yakho noma kamuva waqhuba kabusha. Leli qhinga lokuhlanganisa elilula lisiza ukukuthola ikhwalithi eminingi, futhi yikuphi okuphawulekayo, izixhumanisi zangaphandle eziqondene nesayithi lakho. Konke okudingayo ukukhomba okushiwo okungaxhunyiwe komkhiqizo wakho bese ubuza abalobi balezi zwi ukubeka isixhumanisi kusayithi lakho. Ungenza lula inqubo yokusesha okushiwo umkhiqizo wakho usebenzisa amathuluzi anjengobuchwepheshe njenge-Semalt Website Analyzer, i-Google Search, izaziso ze-Google, njll.Ukukhomba noma kunini lapho igama lakho lomkhiqizo likhonjisiwe, udinga ukusetha isaziso se-imeyili noma isiphequluli.
Nikeza obambisene nabo ibhizinisi ubufakazi bokushintshanisa
Enye indlela ewusizo ongayithuthukisa ngayo ukubonakala kwakho komkhiqizo nokuphakamisa isikhundla sakho ku-Google SERP ngokunikeza ubufakazi kwamanye amasayithi ngokushintshanisa izixhumanisi zawo kusayithi lakho. Le nqubo yokwakha isixhumanisi izokusiza ukuthi ufake izixhumanisi eziningi zangaphandle ezinkampanini ezidumile futhi ufake igama lakho lomkhiqizo emakhasini abo asekhaya noma kumakhasi wokufakaza. Ukunikeza ubufakazi kumawebhusayithi asetshenziswe emakethe yakho emakethe cishe kuzobangela ukuxhumanisa emuva kusayithi lakho.
Thola okubonakalayo ku-roundups yesixhumanisi
Xhumanisa ama-roundups okuqukethwe okubaluleke kakhulu okuthuthukiswe ngababhlogi nabamemezeli bemikhiqizo abahambisa izincwadi zabo njalo. Xhumanisa abadali abajikelezayo ngokuqhubekayo bafune okuqukethwe okunamandla nokuwusizo ukufaka kuhlu lwabo. Kunzima kakhulu ukudala izixhumanisi zokuxhumanisa ngaphakathi kwe-niche yakho yemakethe njengoba udinga njalo ukuqhubeka nokufuna okuqukethwe okubalulekile kuwebhu. Ngaphezu kwalokho, kunengozi ukuthi izivakashi ze-roundups isixhumanisi kungenzeka zingabuyeli. Kodwa-ke, uma ungabahlinzeka ngokuqukethwe okubandakanyekayo nokufanele, amathuba okubuya abuya. Ukuxhumana nabaqaphi besixhumanisi kusebenza okufana neminye imikhankaso yokufinyelela. Into yokuqala oyodinga ukuyenza ukuthola ulwazi loxhumana nabo labahlinzeki bokuxhumanisa bese ubathumelela i-imeyili enekhampasi ngokuphakamisa.
Yakha izixhumanisi ku-YouTube
I-YouTube iyinhlangano yesikhulumi esiphelele sokudala ithrekhi kwisayithi lakho. Amanothi athile kuphela angasebenzisa le ndlela yokwakha isixhumanisi. Lezi zinhla zifaka ubuchwepheshe, imidlalo, imfundo, isayensi, nokuzijabulisa. Inzuzo enkulu yokwakha izixhumanisi kule platform yukuthi amabhulogi wevidiyo afuna ukuthola okuningi njenge-blogger evamile ufuna ukuhamba emakhasini akhe. Ungasungula ubudlelwane obuzuzisayo ngokubambisana nabo bevidiyo ukuze uthole imoto esuka ku-YouTube. Isibonelo, ungakwazi ukuxhumanisa amavidiyo wabo ekuthunyelwe kwakho kwebhulogi, futhi ngokushintshanisa, ungenelela ividiyo yakho kokuthunyelwe kwebhulogi Source .